KB समूहका कम्पनीहरू - किम्रोय बेली समूह
KB समूहका कम्पनीहरू
KB समूहका कम्पनीहरूकिमरोय बेली2018-08-14T16:08:14-05:00
यो किम्रोय बेली समूह कम्पनीहरूको
किम्रोय बेली समूह एक बहु अरब डलर कम्पनी हो र विश्वको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्क्रियात्मक प्रशिक्षण, व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग, परामर्श र सफ्टवेयर विकास कम्पनी नवीकरणीय रोबोटिक्स उद्योगको लागि। केबी समूह निर्बाध रूपमा रोबोटिक्स र कृत्रिम खुफियाको साथ नवीकरणीय उर्जा समाधान एकीकृत गर्दछ। समूहले हाल इस्तानबुल, बार्सिलोना, ह Hongक Kong, गुआन्झाउ, न्यू देहली, ह्याम्बर्ग, ज्युरिख, मियामी र म्यानचेस्टरमा सञ्चालन गर्दछ। किम्रोय बेली कम्पनी अफ कम्पनीहरूको किम्रोय, उसको सुन्दर पत्नी श्रीका र उनका प्यारा बच्चा केलाह बेलीको स्वामित्व रहेको छ। बेलीहरू गर्वका साथ पोप्सी (ईश्वर) र येशू ख्रीष्टको रगतको शक्तिमा विश्वास गर्छन्।
किम्रोय बेली ग्रुप अफ कम्पनीहरूले किम्रोय बेली रिन्युएबल्स, किम्रोय बेली रोबोटिक्स, र किम्रोइ बेली फाउन्डेशन सामेल गर्दछन् र डिसेम्बर २०११ मा सञ्चालन सुरु गरे।
वर्षौंदेखि हामीले हाम्रो व्यापार परिचालन बढ्यौं, अन्टार्कटिकाको अपवाद बाहेक हामीले हरेक महादेशमा ग्राहकहरूको सेवा गरेका छौं। विश्वव्यापी नवीकरणीय उर्जा र रोबोटिक्स क्षेत्रको भविष्यको ड्राईभिंग गर्ने क्रममा हामी हाम्रो क्लाइन्टलाई उत्कृष्ट शिक्षा अनुभव र असाधारण सेवा प्रदान गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न हाम्रा जडहरूसित नजिक रहनको लक्ष्य राख्छौं।
हामी किम्रोय बेली कम्पनीहरूको कम्पनीको कल्पना गर्दछौं जब हामी शरीर बनाउँदछौं। हामीसँग एकीकृत व्यवसायको शरीरको दुई हतियारहरू छन्, केबी नवीकरणयोग्यहरू र केबी रोबोटिक्स। उच्च स्तरबाट हाम्रो दृष्टिकोण भनेको व्यवसायको यी दुई हतियारहरू विस्तार र एकीकृत गर्नका लागि मानव हातहतियार शरीरको लागि भारी लिफ्टिंग गर्न सँगै काम गर्दछ।
स्वाभाविक रूपमा, जब हामी शरीरको धड जोडेर शरीर निर्माण गर्दछौं, खुट्टा, समूहको खुट्टा हामी निकट भविष्यमा अन्य क्षेत्रहरूमा विस्तार गर्ने छौं।
तपाईहरु मध्ये जो जिज्ञासु हुनुहुन्छ र सोचिरहनु भएको छ - समूहको टाउको को बारेमा के हुन्छ? त्यो के हो वा त्यो को हो? मेरो श्रीमती र म यसलाई पूर्ण रूपमा स्पष्ट गरौं - यस समूहको प्रमुख येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र हामी स्वर्गको राज्यको नीतिहरूको पूर्ण सदस्यता लिन्छौं। 🙂
2018 - यूरोप र एशियामा परिचालन अपरेसन
2017 - संयुक्त राज्य अमेरिका र ल्याटिन अमेरिकामा अपरेसनहरू विस्तार गर्नुहोस्
2016 - रास्ता रोबोट सिर्जना गरियो र निर्माण सेवाहरू प्रदान गर्न सुरू गर्नुहोस्
2015 - ग्लोबल सौर प्रशिक्षण र समर्थन सेवा सुरू गर्‍यो
2014 - हाम्रो पहिलो फायर फाइटर रोबोटिक्स किट सिर्जना गर्‍यो
2013 - किम्रोय बेली रोबोटिक्स शुरू भयो
2012 - किम्रोय बेली नवीकरणीयहरू शुरू भयो
2011 - किम्रोय बेली फाउन्डेशन शुरू भयो
जसरी यो स्वर्गमा छ, त्यस्तै पृथ्वीमा पनि छ। हाम्रो लक्ष्य स्वर्ग, हावा, सौर र नवीकरणीय सबै चीजहरूको संसाधनको उपयोग गर्नु हो र हाम्रो सबै प्रयासमा स्वर्गीय मानसिकता को उपयोग गर्नु हो।
हाम्रो दृष्टिकोण भनेको विश्वको सबैभन्दा समृद्ध कम्पनी हो र हाम्रो ग्राहक र ग्राहकहरूलाई बहु-अरबपति बन्नको सशक्त बनाएर समृद्धि वितरण गर्ने। हाम्रो लक्ष्य भनेको उनीहरूका स्टाफ सदस्यहरू खुसी छन् र उनीहरूका नीतिहरूमा स्वर्गीय सिद्धान्तहरू प्रयोग गर्दछन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु हो। येशूको नाममा, आमेन।
किम्रो बेली - निर्देशक
किमरोय बेली किम्रोय बेली कम्पनी अफ कम्पनीका संस्थापक सदस्यहरू मध्ये एक हुन् र नवीकरणीय उर्जा र रोबोटिक्सको क्षेत्रमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो आविष्कारक हुन्।
SHERIKA TROTT-BALEY - निर्देशक
किमरोय बेली ग्रुप अफ कम्पनीका संस्थापक सदस्य शेरिका ट्रोट-बेली विश्वको अग्रणी व्यापारिक दिमाग मध्ये एक